Aprimo na ADAM: Digital Asset Management for the Customer Journey | Martech Zone
Afrịka, ahịa arụmọrụ n'elu ikpo okwu, mara ọkwa na mgbakwunye na nke ADAM Njikwa Akụrụngwa sọftụwia na igwe ojii ya. A matala ikpo okwu dị ka onye ndu na The Forrester Wave ™: Digital Asset Management For Customer Experience, Q3 2016, na-enye ihe ndị a:
Njikọ usoro iheomume na enweghị nhịahụ site na Aprimo Integration Framework - Sdị nwere ike nweta ọhụhụ ka mma ma jikọọ na njikọta nke ahịa na uru ndị ọzọ nke usoro mmeghe nke Aprimo na mgbanwe na igwe ojii.
Ngbanwe nke Nchịkwa Ahịa (MRM) na DAM - Site na ijikọta Aprimo Digital Asset Management na otu Aprimo Marketing Productivity Productivity, ndị na-ere ahịa nwere ohere ịnweta azịza nke igwe ojii, na-enyere njikwa ọrụ arụmọrụ na-enweghị atụ na mmekorita.
Ngwa ngwa ngwa nweta ihe nkwalite - Ndị ahịa nwere ohere na-aga n'ihu na nkwalite nkwalite ọhụụ kachasị na arụmọrụ ọhụrụ na-ahapụ na-akpaghị aka na n'oge nhazi.
Oge ọsọ ọsọ bara uru na-enweghị nsogbu azụmahịa - Ndị na-ere ahịa nwere ike ịdị na-arụ ọrụ na Aprimo n'ime izu ole na ole. Na mgbakwunye, ha nwere ike ịhụ uru nke igwe ojii ha ngwa ngwa site na ngwa ngwa ngwa ngwa nke Aprimo nke na-ebelata oge iji zụọ ahịa - site na ọnwa ruo izu.
Nchekwa nke ụwa, ntụkwasị obi, na scalability nke Microsoft Azure kwadoro - Ebumnuche igwe ojii nke Aprimo bụ nke ebumnuche wuru site na ala, na-enye nchebe 24/7 kachasị mma na klaasị zuru ụwa ọnụ, arụmọrụ, na ntụkwasị obi na uru ndị ọzọ nke igwe ojii, na-akwado ya Microsoft Azure.
Onye nyocha Forrester Nick Barber kwukwara na otu ndị ahịa ga-esi nweta uru site na nnweta ADAM Software nke Aprimo nwetara na nso nso a. Nnweta Aprimo nke ADAM Software Signals Market Consolidation, na-ekwu:
Ezigbo uru nke njikọ a bụ na ugbu a ndị ahịa ga-enwe otu ihe ngwọta n'ofe usoro ndụ niile.
Ugbu a, site na ịkwaga n'igwe ojii, ike ADAM na DAM (Digital Asset Management) lụrụ di na nwunye site na uru nke igwe ojii ahụ, na-enye ndị na-ere ahịa ọkwa nghọta, nhazi na arụmọrụ.
Anyị nọ n'oge ndị ahịa. Ndị otu taa na asọmpi na ahụmịhe ndị ahịa ha nwere ike ịnye. Agbanyeghị, ndị na - ere ahịa juputara n'oké osimiri nke ọdịnaya na - anwa ịnyefe ahụmịhe ziri ezi gafere ọwa kwesịrị ekwesị. Osisi dị elu maka ndị ahịa. Ma na Aprimo, ha nwere otu usoro igwe ojii iji jikwaa usoro ndụ niile, yana ikike ịba ụba na-agbanwe na ụwa nke dijitalụ nke oge a. John Stammen, onye isi oche nke Aprimo
Ejikwara na onyinye SaaS ohuru bu Aprimo Product Content Management. Ejikọtara ya na Aprimo DAM, Aprimo na-enye ohere ka ndị otu ụwa jikwaa ozi ngwaahịa ha na ọdịnaya ahịa ha n'otu ebe iji mee ka ngwa ahịa ngwa ngwa, meziwanye ihe okike, ma na-achịkwa ahụmịhe na-emetụta ngwaahịa na igwe ojii.
Ulo oru di iche-iche gbasara ulo oru nile gbasara ahuike, ndu ndi ahia, na oku, tinyere otu ndi dika Phillips, ASOS na Home Depot, ahoputala Aprimo's Digital Asset Management.
Ozi ndi ozo banyere Aprimo Digital Asset Management
Tags: Adamaprimoaprimo dijitalụ aku managementAsosnjikwa arịa mmụta egodamnjikwa ihe onwunwe dijitalụihe omimiebe obibiPhillips